UPike kunye nomzobo wakhe womzimba wabalinganiswa abahlekisayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Abalinganiswa abamangalisayo kwiMizobo yoMzimba
Umyili kunye nothando olunomdla we-cosplay uKay Pike usebenzisa ukupeyinta umzimba, njengalo mculi, ukuze ube Marvel Comics abalinganiswa bendalo. Lo mzobo womzimba uphefumlelwe yimizobo kaSpiderman, Deadpool kunye nabanye abaninzi eyaziwayo kakuhle ngabo bonke kwaye esikubonile kwiscreen esikhulu kule minyaka idlulileyo.
Ubandakanya izithunzi kunye imigca ehlula imilo kanye njengokuba sinokubona kumdlalo wokuhlekisa emzimbeni wakhe ngokungathi wayengumlingiswa ovela kwikhathuni yakhe yoopopayi. Ubuqhetseba obufunyenweyo bukufanele ngokwenene ukunconywa ukuze ekuqaleni sicinge ukuba sijamelene nebhinqa lokwenyani okanye elinye lamagorha eMarvel.
UPike unayo Kube neendibano ezininzi ezihlekisayo ethengisa iimpahla zakhe zokunxiba, eCanada Cosplay, iminyaka emininzi ngoku. ICosplay yayiyindlela entle yokunxibelelana kunye nokonwabela ezi ngqungquthela ngendlela eyahlukileyo, ngaphandle kwento yokuba kwicandelo lezengqondo kuye kwalunga kakhulu ukuba uzive ungomnye wamaqhawe abawathandayo.
ICosplay yiyo Inxalenye enkulu yobomi bukaPike, Kodwa ingxaki yempilo imenze ukuba afumane ezinye iindlela zokuqhubeka nothando. Le ngxaki inento yokwenza nesifo samathambo esibelekweni esingamvumeli ukuba ahlale iiyure, into ebalulekileyo kwi-cosplay. Ke ngoko, ukuzifumana ekuthanda abalinganiswa abathandayo ngenxa yokupeyinta umzimba kuye kwamenza wakwazi ukuqhubeka nothando lwakhe.
UPike uhlala eyakhe Umjelo kwiTwitch y KwiYouTube, ke ukuba ujonga umbono othile ophambeneyo wepati okanye indibano yamahlaya, ungaphoswa kukuqeshwa kwaye uhambe ngamajelo abo. I-superhero esinokuyifumana inxibe loo mzobo wepeyinti okhethekileyo njengoSpiderman.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Abalinganiswa abamangalisayo kwiMizobo yoMzimba
Enkosi Mariano! Kwakhona ngekhonkco. Ndiyabulisa!